WARBIXIN: Weeraryahannadii ugu xumaa ee ay kooxda Barcelona soo iibsatay, misna ku khasaartay 10-kii sano ee la soo dhaafay + Sawirro – Gool FM
(Barcelona) 31 Luuliyo 2016 – Wargeyska caanka ah ee ‘Marca’ ee ka soo baxa Spain ayaa soo bandhigay Liiska heshiisyo ay u aqoonsadeen in ay ahaayeen kuwii ugu xumaa ee ay Barcelona kula soo wareegtay ciyaartooy, misn, iyadoo hadafkii ay ka lahayd aan ka gaarin ay iska iibisay, kuna khasaartay.
Tababarihii hore ee Barcelona Pep Guardiola ayaa isagoo isku dayayay inuu buuxiyo booskii uu banneeyay Eto’o waxa uu 2009, 87 Milyan oo Euro uu ku soo iibsaday Zlatan Ibrahimovic, hase yeeshee hal xilli ciyaareed uun isagoo la halgamayay in uu la qabsado kooxda waxaa 24 Milyan oo Euro looga iibiyay AC Milan, iyadoo halkaasina Barcelona ay khasaartay 63 Milyan oo Euro.
Kaddib markii uu sanad wanaagsan la qaatay xulka Spain oo qaaday Koobkii Adduunka 2010-kii, waxaa Barcelona ay soo xero gelisay David Villa oo loogu talo galay inuu buuxiyo booskii Ibrahimovic, waxaana ay ku soo gadatay 40 Milyan oo Euro oo ay kaga soo qaadatay Valencia, hase yeeshee markii kooxda Barca uu yimid Neymar ayaa waxaa Villa 5.1 Milyan oo Euros looga iibiyay Atletico Madrid, taasoo ka dhigay in Barcelona khasaartay 34.9 Milyan oo Euro.
3- Alex Song
Song waxa uu heshiis 5 sanadood ah u saxiixay Barcelona kaddib markii 2012 ay kala soo wareegtay Arsenal, laakiin waxa uu ku hungoobay in uu la qabsado kooxda Barcelona oo labadiisii sano ee ugu dambeysay heshiiskiisii amaah ahaan ku siisay kooxda West Ham United, halkaasina Barcelona ku khasaartay 19 Milyan oo Euro.
Waxa uu ahaa mid ka mid ahaa ganacsiyadii ay Barcelona gashay kuwoodii ugu xumaa xilligan casriga ah, Henrique waxa uu 4 sano la joogay Barcelona isagoo aan hal kulan oo rasmi ah u safanin.
16.5 Milyan oo markii hore Barcelona kaga soo qaadatay kooxda Palmeiras ayaa ku dhammaaday in ay si bilaash ah ugu dirto kooxaha Bayer Leverkusen iyo Racing Santander.
5- Alexander Hleb
Waxa uu ku jiray dhowr ciyaartooy oo ay Barcelona ka soo qaadatay Arsenal, Hleb waxaa si lacag la’aan ah amaah ahaan loogu siiyay Stuttgart, Birmingham City iyo Wolfsburg, micneheeduna waa Barcelona inay khasaartay 15-kii Milyan ee Euro oo ay ku soo iibsatay.
Sida Henrique, ciyaaryahan Keirrison waxa uu ahaa ciyaaryahan ku guuldarreystay in uu booska joogtada ah ka helo safka hore ee Barcelona, waxaana kooxda Catalunya ay 14 Milyan oo Euro kaga soo qaadatay Palmeiras, hase yeeshee waxaa si bilaash ah amaah ahaan loogu siiyay Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro iyo Coritiba.
7- Martin Caceres
Ciyaaryahankan waxa uu 2008, Barcelona kaga yimid dhinaca Villarreal, hase yeeshee hal xilli ciyaareed kaddib waxaa uu ka soo dheelay Juventus, Sevilla iyo aakhirkii Nervionenses oo 3.5 Milyan oo Euro si joogto ah ugu iibsatay, waxayna taa ka dhigan tahay in Barcelona khasaartay 13 Milyan oo Euro, maadaama markii hore ay ku soo gadatay 16.5 Milyan.
8- Dymtro Chygrynskiy
Sanadkii 2009, ayay Barcelona soo iibsatay Chygrynskiy, balse 25′ Milyan ee Euro ee ay ku soo iibsatay ayay khasaartay 10 Milyan oo ka mid ah, waxaana aakhirkii ay 15 Milyan oo Euro ka siisatay Coritiba.
9- Adriano Correia
Adriano oo ay Barcelona 2010-kii lacag gaareysa 9.5 Milyan oo Euro kaga soo iibsatay Seville ayaa Jimcihii la soo dhaafay, waxaa 600,000 oo Euro looga iibiyay kooxda Besiktas ee Waddanka Turkiga, halkaasna Barcelona waxay khasaartay 8.9 Milyan oo Euro.
Zidane oo ka codsaday Florentino Perez saxiixa laacib kaan...